Guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka oo wada ka-tala-gelinta dadka Hindisaha Xeerka Shirkadaha – Kalfadhi
Guddiga Ganacsiga iyo Warshadaha ee Golaha Shacabka ayaa kulan wadatashi ahaa oo uu maanta kula yeeshay Muqdisho Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha iyo ganacsato, ayna qeyb ka ahaayeen sharci-yaqaano ayaa looga dooday sida lagu heli karo xeer ilaaliya ganacsiga iyo maal-gashiga dalka.
Kulanka, oo lagu soo bandhigay Hindisaha Xeerka Shirkadaha Soomaaliya oo Aqriska Koowaad ka maraya Golaha Shacabka, ayuu Guddoomiyaha Guddiga Ganacisiga iyo Warshadaha, Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan (Beene-Beene), sheegay iney muhiim tahay iney xubnaha ka qeyb-galay kulankaas ka wada shaqeeyaan wax ka sameynta hindisahaas.
“Sababta aan dhageysi dadweyne u suubineynay waxay tahay wixii aan ka soo shaqeeneynay in loo helo aragtida dadkii lagu dhaqi lahaa (hindisaha) sharcigaan” ayuu yiri Xildhibaan Beene-Beene. Waxaa, isaga oo tusaalooyin ka siinaya ka qeyb-galayaashii kulanka, uu xusay sida ay yihiin xeerarka ganacsiga, maal-gashiga ama warshadaha ee dalalka aduunka, oo ay ka mid yihiin kuwa deriska.
Guddiga Ganacsiga iyo Warshadaha, Xildhibaan Beene-Beene, waxa uu sheegay iney hindisahan ka shaqeynayeen muddo sanad ku dhaw, ayna ka qeyb-galinayeen cid kasta oo uu quseeyo, “walina waxa uu yahay” buu yiri “bilow”. Waxa uu sheegay in sababta ay ka shaqeynta hindisahan u qaadatay waqtigaas ay tahay daruufaha adag ee uu ku shaqeeyo Golaha, oo Kalfadhigiisa 4-aad ka bixi la’ khilaaf.
“Waxa ugu daran waa in la meel-mariyo sharci aan dalkan ka socon karin” ayuu yiri Xildhibaan Beene-Beene. Waxaa, marka uu sidaa dhahayey, uu sababeynayey in waqtiga uu qaatay ka shaqeynta hindisaha ay tahay mid uu qasbayey wax ku oolnimada ay la rabaan inuu u yeesho dalka, marka uu noqdo sharci. “Sharci wax ku ool ah hal maalin lama meel-mariyo ee hadba dib u eegis ayaa lagu sameeyaa” ayuu yiri Beene-Beene.
Guddoomiyaha Guddiga Ganacsiga iyo Warshadaha ee Golaha Shacabka, Maxamuud Cabdiraxmaan Beene-Beene, waxa uu sheegay iney sii wadi doonaan ka tala-gelin Hindisahan Sharciga Shirkadaha cid kasta oo uu quseeyo, “waxaana ujeedkeenu yahay” buu yiri “inaan soo saarno sharci la jaan-qaadi kara daruufaha dalka”.